‘पत्रकारको फोहोर’ « Janata Samachar
काठमाडौं । बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीबाट पहिलो पटक महासंघको निर्वाचन भएकाले माहोल निकै उत्साहजनक देखिएको थियो । करिब दुई साता अघिबाट नै उमेद्वारलगायत मतदाता पत्रकारमा समेत राम्रैसँग चुनाव लागेको स्पष्ट देखिएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीका केही उमेद्वारहरु भोट माग्नका लागि देश दौडाहामा समेत हिँडेका थिए भने सामाजिक सञ्जालदेखि अधिकांश सञ्चार माध्यममा निर्वाचनकै चर्चापरिचर्चा थियो ।
यसरी उत्साहका साथ पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भइरहँदा सँधै अरुमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ भने धेरै भेटिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि लड्ने प्रतिबद्धता गरेर भोट मागिरहेका पत्रकारहरु जो आफैँ महिनौदेखि तलब नपाएर कम्पनीको प्रशासनको ढोका चिहाइरहेका छन्, उनीहरुनै यतिको तामझामका साथ निर्वाचन कसरी गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न आममानिसमा जागिरहेको छ । देशभर भोट माग्दै हिँड्ने, यतिको प्रचारप्रसार गर्ने, पर्चापम्प्लेट छाप्ने, टिसर्ट वितरण गर्ने सम्मको हैसियत के श्रमजीवी पत्रकारिताबाटै बनाएका हुन् ?
पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनिरहँदा केही अपवादबाहेक अधिकांश उमेद्वार विभिन्न गुट, उपगुटका नाममा सीधा राजनीतिक पार्टी छत्रछायाँमा रहनुले के बुझाउँछ ? स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै राजनीतिक ट्याग लगाएर भोट माग्ने पत्रकारहरुबाट कस्तो पत्रकारिताको अपेक्षा गर्ने ?
हरेक ठाउँमा राजनीतिक प्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारहरु आज आफैँप्रति भने प्रश्न गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा निर्वाचनस्थलमा देखिएको दृश्यले जोकोहीलाई विरक्त बनाउँछ । राजनीतिक कार्यक्रममा होस् वा सभासम्मेलनमा फोहोर भयो, नेताहरुले कार्यक्रम गरेपछि सफा गरेनन् भनेर समाचार बनाउन तछाडमछाड गर्नेहरुले आज पत्रकारको निर्वाचनस्थलमा भएको फोहोर देखेनन् सायद । सँधै अरुमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारहरुको यो अनुशासन हेर्दा नेपाली उखानको याद आउँछ, ‘आफ्नो आङको भैसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा’ ।
विश्वमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरी विभिन्न सतकर्ताका उपायहरु कडा रुपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । उसले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ अपनाउन आग्रह समेत गरिसकेको छ । आम जनतामा सूचना पुर्याउने सञ्चारजगतका पत्रकारहरुले नै मतदानस्थलमा न भौतिक दूरी कायम गरेको देखियो न त सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको नै देखियो ।
यसका वावजुद अबको तीन वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउने पत्रकार नेताहरुले साँच्चिकै पत्रकारका लागि सम्झनालायक कार्य गरेर पत्रकारको मन जित्न र पत्रकारिताको मान राख्न सकोस् । अग्रीम बधाइ तथा शुभकामना ।